Waa kee xidigga Man City u safta ee 2014 waddooyinka Rinjiyeyn jiray maantana qaata 75,000 Gini isbuucii? - Hablaha Media Network
Waa kee xidigga Man City u safta ee 2014 waddooyinka Rinjiyeyn jiray maantana qaata 75,000 Gini isbuucii?
HMN:- Adduunku waa harka labadiisa geline, Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Waddanka Ingiriiska Gabriel Jesus ayaa soo bandhigay sawirro taariikhi ah oo isaga ah kuwaas oo laga qaaday 3 sanadood ka hor.
Sanadkii 2014 isagoo caga caddaan ah ayuu Gabriel Jesus oo 17 sano jir ah waxa uu rijiyeyn jiray waddooyinka Sao Paulo xilligaas oo ay magaalladu isku diyaarinaysay Koobka Adduunka 2014 ee Brazil lagu qabtay, waxaana Jesus uu sanadkii oo dhan heli jiray 3,000 oo Giniga Isarliinka ah.
Maanta wuxuu Jesus ku nool yahay nolol 5 star ah, isagoo sanadkii jeebka ku shubta 4 Milyan oo Gini, taas oo aad uga duwan noloshiisii hore ee adkeyd.
Gabriel Jesus waxa uu Koobkii Adduunka 2014 ee Brazil ka daawanayay shaashadda Telefishinka markaas oo nus dhammaadkii 7-1 Jarmalku ku bah dilay xulka Brazil, laakiin Koobka Adduunka 2018 waxa uu ugu cad cad yahay xiddigaha Brazil hoggaamin doona tartankaasi, taas oo imaanaysa 4 sanadood kaddib Koobkii Adduunka ee 2014.
Gabriel Jesus posted a picture of himself painting the streets of Brazil ahead of the World Cup
Gabriel Jesus oo laamiga Rinjiyeeynaya
The youngster was joined by friends from the community to brighten up the neighbourhood
Jesus would have watched the World Cup at home, but he is likely to play at the next one
Jesus has already made a big impression after just six months as a Manchester City player
Jesus iyo maanta oo uu xiddig ka yahay Manchester City